ज्ञानेन्द्र र ओली गएपनि कुर्सीको खेल जारी छः बाबुराम भट्टराई – Bikash Khabar
ज्ञानेन्द्र र ओली गएपनि कुर्सीको खेल जारी छः बाबुराम भट्टराई
Top News जीवन यात्रा राजनीति विचार
सोमबार, १४ भाद्र २०७८ गते ९:०४ मा प्रकाशित	Author Pradip Adhikari	Comment(0)	108 Views
१४ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले सत्तामा जो कोही आएपनि कुर्सीको खेल जारी रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्‍जालमार्फत ज्ञानेन्द्र र ओली गए पनि कुर्सीको खेल जारी रहेको भन्‍दै वैकल्पिक शक्तिको खोजी पनि जारी रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
भट्टराइले आज ट्विट गर्नुभएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र गए,ओली गए तर कुर्सीको खेल जारी छ१भारत,खाडी पस्ने युवाहरूको लर्को जारी छ! कमिसनखोरको खेलो जारी छ! छिमेकीको हैकम जारी छ! जयसिंह धामीको वेपत्ता जारी छ१छाउपडी जारी छ१छोइछिटो जारी छ ! मधेसी,थारू,जनजातिको पहिचानको खोजी जारी छ१श्रमिकको चुलो खाली छ अतःवैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी छ !’
जीवन यात्राः २३ वर्षपछि रातो टीका र पछ्यौरी
दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-३ साउनेपानी निवासी पदममाया थापाले २३ वर्षअघि श्रीमान् गुमाइन् । श्रीमान् बित्दा उनको काखमा पाँच वर्षकी
आज नेप्से बन्द